Topnepalnews.com | 'लोग्ने मान्छे देखेर डर लाग्छ'
Posted on: May 03, 2016 | views: 659
करिब ६ वर्ष पछि १८ वर्षिय बिपना ठगुन्ना (नाम परिवतर्तन गरिएको) भारतको कर्नाटक, बैगलोर, अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, हेचल मुकेश पाली एप्पल नेष्ट १३ क्रस १४ स्थितबाट भागेर दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. २, कालिका टोल फर्केका छन् । बिपनाले युवतीले करिब ६ वर्ष सम्म जून क्रुरता भोग्नु प¥यो त्यो संसारमै अकल्पनीय छ । देह व्यापारको धन्दा गर्दै आएका केही मानिसले उनलाई दिन भरि काममा लगाउने र राती बुकिङ्ग गरेर शारीरिक सम्पर्क राख्न बाध्य पारेका थिए ।
बिपना जब मात्र १२ वर्षकी थिईन तब उनलाई जागिरको प्रलोभनमा दलालहरुले नेपालबाट भारत पु¥याएका थिए । दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. २, कालिका टोल बस्ने उनका छिमेकी दाई भन्ने शंकर धामीले उनलाई १२ वर्षको उमेरमा बिभिन्न पैसा कमाउने प्रलोभन देखाएर भारतको कर्नाटक, बैगलोर, अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, हेचल मुकेश पाली एप्पल नेष्ट १३ क्रस १४ मा पुगाएर वेश्याबृद्धी गर्न बाध्य बनाएका थिए ।
जब उनी भारत पुगिन तब उनलाई एउटा सानो अध्यारो कोठामा बन्द गरेर राखे । किनकी उनी अब दलालहरुको हातबाट वेश्यालयमा पुगिसकेकी थिईन् । उनलाई काँचो उमेर र छिमेकी शंकर दाई प्रतिको बिश्वासले यस्तो कुराको थाहै भएन् । बैगलोरका ठुला महलहरुमा उनि दिनदिनै बेचिएकी उनलाई ६ वर्ष सम्म राम्रो संग सुत्न समेत नदिएर दिनरात ग्राहकको यौन प्यास मेटाउन बाध्य पारियो ।
रातमा उनलाई सुतेको भएपनि व्युझाएर ग्राहक संग जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राख्न लगाइन्थ्यो । उनले रातमा पनि राम्रो संग सुत्न पाउदैनथी । त्यही बीचमा केही समय पछि उनलाई त्यहांको पीडा असह्य भयो । सानो उमेरको शरिरलाई सेठहरुको बडेमानको जिउले शरिरै थाकिसकेको थियो । दिभरीको अर्काको घरमा गएर काम गर्नु पर्ने सातामा ४ चोटी तथा ५ चोटी शंकर धामीले लगेर ८÷१० मञ्जील अग्ला कोठामा छाडेर जान्थे, बिपनालाई । त्यही बेला भाग्यले त्यो नर्कबाट बाहिर निस्कने एउटा बाटो देखायो त्यो उनको लागि गर्व र सम्मान बाटो सावित भयो । खबर अनुसार बिनिताले एक दिन राती बुकिङ्गमा गएको बेला शौचालय लागेको बहाना काडेर भाग्ने योजना बनाईन् जसमा उनी सफल भइन् ।
यसै सन्द्रभमा दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. २, कालिका टोल बस्ने १८ वर्षिय बिपना ठगुन्ना (नाम परिवतर्तन गरिएको) संग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ः–
“कहाँ बाट सुरु गरौ । सुरु गर्न समेत आफैलाई लाज लागेर आउछ् । आज घरबाट बाहिर निस्कन समेत सकिरहेको छैन् । मेरो जिवननै बरबाद भयो । सानोको छदाको अर्काको भनाईमा लागेर पैसा कमाउन जादा मेरो जिन्दगी नै बरबाद भएर आयो । म त्यती बेला कक्षा ८ मा पढ्दै गर्थे । हाम्रो घरको करिब ५ मिनेको दुरीमा शंकर धामीको घर थियो । शंकर दाई बैगलोरबाट आउनु भएको थियो । उहाँको सबै आफन्त यतै दोधारा चाँदनीमा भएपनि शंकर दाई भारतको बैगलोरमा आफ्ना जहान लगेर बस्नु हुन्थ्यो । बैगलोरबाट शंकर दाईले मलाई राम्रो जागीर लगाई दिन्छु भन्दै भारत जान भन्दै आउनु भएको थियो । मेरो उमेर १२ वर्षको थियो ।
अहिले म १८ वर्षको पुगेकी छु । तिम्रो ४ बहिनी छौं, तिम्रा बाबा पनि बेरोजगार रहेका छन् । तिमीले पैसा कमाएर महिनै पिच्छे घरमा पठाई दिएपछि तिम्रा घर परिवार कति खुशी मान्लान् भन्दै आउनु भएको थियो । शंकर दाईले । मैले पनि आफ्नो घरको आर्थिक कठिनाईको बारेमा निकै सोचे । पछि आएर जान ईच्छा पनि जाग्यो । मैले शंकर दाई लाई मेरो घर परिवारलाई सोध्नु भने । शंकर दाईले घरमा सोधे तिमीलाई जान दिदैनन् त्यसैले थाहै नदिई रोजगारीको जानको लागी मलाई फकाए । म पनि कस्तो । शंकर दाई माथी बिश्वास गरे । मलाई भोली जाने तयार हुन शंकर दाईले भने । उहाँ अन्तजी ४२ वर्षको उमेरको मैले सानै देखि चिन्ने छिमेकी दाई हुनुहुन्छ् । उहाँको श्रीमती र छोरा छारी बैगलोरमा बस्ने गर्थे ।
मलाई उहाँ प्रति निकै बिश्वास गर्थे । भोली जानको लागी शंकर दाईले भने पछि मैले घरपरिवारमा कसैलाई सुईको समेत दिएन् । त्यस साँझ खान खाई सकेपनि सुत्न ओछ्यानमा सुते । अबेर सम्म निन्द्रा लागेन् । त्यस रात मलाई खुशी र दुखको पिडा मनमा लिएर निकै लामो परिकल्पना गरे ।
एकातिर मैले कमाएको पैसाले मेरो घरको आर्थिक परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने खुशी थियो भने बाबा, आमालाई नसोधेर छोरी मान्छेले त्यती टाढा जानुको पिडा एकातिर थियो । बिभिन्न परिकल्पनामा डुब्दै कति बेला सुतेछु पत्तोनै भएन् । बिद्यालय जाने बहानाले बिहान घरबाट हिडे । म, एकसरो लुगामा भारत पसे । हामी ४ दिन लगाएर भारतको कर्नाटक, बैगलोर, अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, हेचल मुकेश पाली एप्पल नेष्ट १३ क्रस १४ भन्ने स्थानमा पुग्यौ । शंकर दाईले मलाई आफ्नै नाता पर्ने भन्ने प्रेम सिंह ठगुन्ना भन्नेको घरमा छाडेर आफु आफ्नो कोठामा जानुभयो ।
प्रेम सिंह ठगुन्नाको घरमा उनका श्रीमती बसन्ती ठगुन्ना र २ छोराहरु थिए । सुरु सुरमा त्यहा मलाई राम्रै ब्यहार गरे । एक साता नबित्दै मेरो नौकरी पनि सुरु भयो । मैले १४ अलग अलग घरमा गएर भाडा सफा गर्नु पर्ने थियो । १४ अलग अलग घरमा गएर भाडा सफा गरेबाफत मासिक २३ हजार भारतिय रुपियाँ पाउने सम्झौता शंकर दाईले मिलाउनु भएको थियो ।
मासिक रकम पाउने बित्तिकै शंकर दाई म बाट खोसेर लगिहाल्नुहुन्थ्यो । काममा लागेको २ महिना नबित्दै मलाई कुटपिट गर्न थालियो । प्रेम सिंह ठगुन्नाका छोरो समेतले म माथी यौन शोषण गर्न थाले । शंकर धामीले सातामा ४ चोटी कोठा देखि टाढा अग्ला अग्ला कोठामा लगेर छाडेर आउनु हुन्थ्यो । रातभरी मेरो यौन शोषण गर्थ्यो ।
मेरो कजोर शरिर थियो । मोटा मोटा सेठहरुको शरिरले मेरो शरिर थकित गराउथ्यो । त्यहांको असह्य पिडाले मेरो मनमा निकै चोट लाग्थ्यो । तब देखि लाग्ने मान्छे देखि डर लाग्छ् । म, पिडाले नमाने पछि मदिरा सेवन गरेपछि निर्घातरुपमा मलाई पिट्थ्यो । एक रात म सेठको सुते बाफत शंकरले रु. ५ हजार देखि १० हजार सम्म रकम लिने गर्थे ।
मलाई भाडा माझेको मासिक तलब समेत पैसा दिएनन् । दिन रात मेरो रोएरै बित्यो । सञ्चो नभएपनि दिन रात म बलत्कारको शिकार बन्नु प¥यो । कति जनाको ओछ्यानको शिकार हुनु प¥यो, मैले औलामा गन्ती गर्न सकेन्”
-दोधारा चाँदनीका पत्रकार पप्पु गुरुङ पिडीतसँग गरेको कुराकानीमा आधारित